Diyo post :: ट्रिपरको ठक्करबाट जडिबुटीमा स्कुटर चालकको मृत्यु, दुर्घटनापछि स्थानियले यसरी जलाए ट्रिपर ! ( भिडियोसहित) ट्रिपरको ठक्करबाट जडिबुटीमा स्कुटर चालकको मृत्यु, दुर्घटनापछि स्थानियले यसरी जलाए ट्रिपर ! ( भिडियोसहित) - Diyo post
ट्रिपरको ठक्करबाट जडिबुटीमा स्कुटर चालकको मृत्यु, दुर्घटनापछि स्थानियले यसरी जलाए ट्रिपर ! ( भिडियोसहित)
काठमाडौँ । राजधानीको जडिवुटीमा मालबाहक ट्रिपरले एक स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ । स्कुटरलाई उक्त ट्रिपरले करिब २० मिटर सम्म घिसारेर लगेको स्थानियहरुले बताएका छन ।
बा ४ ख ३५५८ नम्बरको ट्रिपरले बा ७० प ९३९९ नम्बरको स्कुटरलाई वुधबार मध्यान्ह ठक्कर दिएको हो । दुर्घटनामा परि स्कुटर चालक काभ्रेकी अस्मिता भण्डारीको मृत्यु भएको महानगरिय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरले जनाएको छ । स्कुटरको पछाडी बस्ने अस्मिताकी श्रीमान आशिष जोशी गम्भिर घाईते भएको र उनको विएण्डवि हस्पिटलमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनापश्चात आक्रोशित बनेका स्थानियले ट्रिपरमा आगजनी गरेका छन । आगजनिबाट ट्रिपर क्षतिग्रस्त बनेको छ । आगजनीको केही समयपश्चात ट्राफिक प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतले आगो नियन्त्रणमा लिएका छन ।
दुर्घटनापछि कोटेश्वर, जडिबुटी, पेप्सिकोला, लोकन्थली लगायतको क्षेत्रमा यातायात ठप्प भएको ट्राफिक प्रहरी जडिबुटीले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् दुर्घटनापछि यसरी ट्रिपरमा आगजनी गरियो: